Nagu saabsan - Putian City Qurxoon Guryaha Qurxinta Co., Ltd.
Ku wac si amar ah
3D Wall Wall Panel
Qurxinta Guryaha ee Qurxoon waxay ku taalaa Magaalada Putian, oo ah magaalo xeebeed ku taal koonfur-bari ee Shiinaha, oo la aasaasay 1998, kuna takhasustay farshaxanka biraha farsamada gacanta ee 3D. Ilaa hada, waxaa jira 4 taxane ah sida soo socota:
1) CHB (rinjiyeynta aluminium midab leh)
2) HB (rinjiyeynta aluminium)
3) LH (aluminium saabuun, kaas oo isku jira rinjiyeynta saliidda iyo farshaxanka aluminium).
4) Rinjiyeynta LED
Our warshad daboolayaa 8000 mitir murabac iyo 1000 mitir oo laba jibbaaran qolka muunad. Waxaan ku dhagannahay mabda'a ah "tayada marka hore, adeegga marka hore, hagaajinta joogtada ah iyo hal-abuurnimada si loo daboolo shuruudaha macaamiisha.
Waa maxay 3D rinjiyeynta saliida birta
3D rinjiyeynta saliida birta waa wax soo saar aad u cusub, waa rinji gacmeed saxan aluminium ah oo la xoqay. qurxinta
Dusha sare ee aluminiumku waa la safeeyey waqti ka dib waqti ka hor rinjiyeynta. Xididdada quruxda badan ee sabuuradda aluminium waxay u baahan yihiin in la safeeyo marar badan si looga dhigo kuwo jilicsan oo nool.
Rinjiyeynta guddiga Aluminium waa naqshadeynta cusub iyo sheyga dheereeya ee rinjiyeynta aluminium.
Guddiga aluminiumka la safeeyey ka hor rinjiga gacanta sabuuradda, oo ku dabool daaha saafiga ah si uu rinji u dhalaalayo oo kaamil u noqdo.
Qiyaastii 30 naqshad oo cusub ayaa la soo saari doonaa bil kasta oo dhammaantood lagu ridi doonaa qolka muunadda, oo daboolaya 1000 mitir murabac. Waa lagusoo dhaweynayaa inaad nasoo booqato.
FANKA HANDSOME waxay ka soo qayb galaan xafladaha CANTON FAIR iyo qaar kale oo ka mid ah Carwooyinka Caalamiga ah ee Sannad kasta, iyagoo ku caanbaxay sumadda iyo wax soo saarka adduunka.
Dadaal aan kala go 'lahayn, HANDSOME ARTS ayaa hadda ku guuleysatay sumcad la isku halleyn karo iyo sumcad wanaagsan oo ka dhex jirta macaamiisheena oo leh tartan wanaagsan. Ku soo dhowow inaad ballaariso ganacsiga annaga oo gacmaha is haysta!
Nooca Qolka Tusaalaha
Bandhigga cadaalada ee Canton
Wax Weydiin Hore
Qurxinta guriga ee qurxoon waa soo saaraha xirfadleyda ugu horreeya ee 3D rinjiyeynta saliidda birta ee Shiinaha oo leh tayada ugu fiican waqtiga oo dhan.Waad naga aamini kartaa oo waxaad aaminsanaan kartaa sawiradeena gaarka ah iyo hal-abuurnimada inay kuu keeni karto guul weyn!
Aagga Warshadaha Chigang, Hanjiang Dist, Putian, Shiinaha